I-Corentin Tolisso Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance I-Corentin Tolisso Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Coco". Indaba yethu ye-Corentin Tolisso Ingane kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi iqembu lakhe laseFrance liwina iNdebe yoMhlaba ye-2018 FIFA. Kodwa-ke, bambalwa abambalwa abheka i-Bio kaCorentin Tolisso eyithakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UCorentin Tolisso wazalwa ngosuku lwe-3rd ka-Agasti 1994 kumama wakhe waseFrance, uMarie-Chanta noyise waseTogol, uVincent Tolisso (okufanekiselwe ngezansi) eTarare, eFrance.
UTolisso wakhuliswa emlandweni omncane ophansi. Wakhula nodadewabo, uMarina eT Thizy, idolobhana elincane laseFrance. Njengesikhathi sokubhala lesi sihloko, ugogo nomkhulu wakhe basaphila. Uyise wayekade engumthumeli nonina esebenze njengomqondisi wabakhubazekile ekhaya eT Thizy. Ekhuluma ngokuqala komndeni wakhe othobekile, uTolisso ushilo;
"Ngiyazi ukuthi ngivelaphi, futhi lokho kuzohlala kunjalo. Lona ngumlingiswa wami. Kubonisa ukuthi abazali bami bangikhulisa kanjani. "
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Iphupha elikhulu
Ukukhushulwa okuthobekile kukaTolisso kwamvumela ukuba aphuphe elikhulu lokuba ngumdlali webhola lezinyawo ngisho noma bekhona ezincane futhi ezibuthakathaka. Lokhu kwabangela ukukhathazeka kwabazali bakhe abacabangela ezinye izindlela uma kwenzeka ukwehluleka kwebhola.
Abazali bakaCorentin Tolisso babezizwa ukuthi imfundo yindlela engcono kakhulu yendodana yabo, ngaleyo ndlela ilandela inqubekela phambili yakhe yokufunda. Noma kunjalo, izinto azizange zibenzele zona njengoba bebethemba. Esikoleni, uTolisso wayenqika ukutadisha ngenkathi udadewabo, uMariana efunda kalula. Naphezu kokuhlupheka, abazali bakhe babengafuni ukuthi indodana yabo iphume esikoleni igcizelela ukuthi kumele aqedele isikole esiphakeme ngaphambi kokuthatha ibhola ngokungathí sina.
Kodwa-ke, lokho akuzange kumise uTolisso ukuba angenakho ukuzimisela ngokucophelela ukwenza amaphupho akhe afezeke. Izifiso zakhe zokuba ngumdlali webhola lezinyawo zazingakaze zidlule.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -I-Career BuildUp
Ngesikhathi esikoleni edolobheni lakhe elincane uT Thizy, uTolisso ubheke iBayern Munich ukudlala futhi anqobe i-UEFA Champions League ngenkathi ye-2000- 2001. Ukunqoba kwabo okwenzekile kwamenza waba ngumdlali weqembu futhi waholela ekwakheleni ihembe laseBayern njengomfana omncane okufanekiselwa ngezansi.
Uthando lukaTolisso lwebhola lwambona wabhala ohlwini lweqembu lesikhamuzi sendawo, uStade Amplepuisien owamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe ngesikhathi esikoleni. Esikoleni semfundo yentsha, uTolisso wadlala ibhola lesikhathi esithile ngesikhathi seminyaka eyi-4. Wavusa ngaphezu kwezinkampani zentsha.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngonyaka we-2004, abazali bakaTolisso bavuma ukudlulisela indodana yabo kuF FC Pays de l'Arbresle lapho engadlala khona ibhola lezemidlalo elincintisana kakhulu. E-FC Country, intsha yaseTolisso yayinokunyuka kwemvula. Ikhono lakhe lokubhekana nodumo lwaba ngqo ngokulingana namandla akhe okusingatha ibhola. Lokhu kuboniswa njengoba ehola ithimba lakhe ukunqoba izintambo ezibalulekile njengoba kuboniswe ngezansi.
Ukuphakama kwe-meteoric kwaTolisso kwaholela ekubizeni i-Lyon academy (abanikazi beFrance League babhalisa phakathi kwe-2000 kuya ku-2008) ukuhlolwa. Ngalesi sikhathi, isikole esiphakeme siphelile futhi kwakukhona ibhola eliqinisekisiwe elizokhokha. UTolisso wadlulisa izilingo ngemibala endizayo futhi wahlala ezinkundleni zaseFrance lapho eqeda khona umsebenzi wakhe osemusha. Ngesikhathi esebenza phambili, u-Tolisso ubonakale engcono kunazo zonke ezenza ukuba athole izijaji eziningi eziningi ezivela eYurophu.
Ngo-14th of June 2017, Bayern, iqembu ayeyithandile yonke impilo yakhe yaluthola ukusayina kwakhe. Imali yayiyiyona enkulu kunayo yonke eyake yamukelwa yiLyon kusukela ekudayiseni komdlali. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kweqembu laseFrance eliba yingxenye yeqembu le-2018 World Cup yokunqoba, kunomfazi, ug noma intombi. Ngaphandle kokungabaza, ubuntu bukaTolisso obunamathemba, kanye nendlela yakhe yokuphila emkhatsini womdlalo wakhe wakhe isithombe esihle.
UCorentin Tolisso unothando lokuphila kwakhe okuthiwa "Sarah". Bobabili abathandi, abafanekiselwe ngezansi bebelokhu bathandana kusukela besengumfana.
Kuyinto nje kuphela isikhathi ngaphambi kokuba uSara noTolisso bashade.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Udadewabo kaCorentin Tolisso, uMarina waba yingxenye yokugcina iqembu laseFrance lilandela umfowabo kanye nalabo abalingana nabo bewathola i-2018 World Cup yeFrance.
Ngaphansi kukaMarina, umama wakhe Marie-Chanta noVincent oyinhloko yomndeni wakwaTolisso.
UVincent, uyise wabo ungumfiki oshiya eTogo, izwe lakubo eNtshonalanga Afrika ukufuna impilo engcono nekusasa eliqinisekisiwe labantwana bakhe eFrance. Ukuziqhenya kwakhe ngezingane zakhe kufanelekile kumkakhe, uMarie-Chantal, onomqondo ocacile. Bobabili abazali baziqhenya ngokuba noCorentin owenza kahle umsebenzi wakhe.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okuphila komuntu siqu
U-Tolisso wayengase abe ozikhukhumezayo, enenkani, ozikhukhumezayo futhi engaqondakali. Akathandi ukunganakwa, ukubhekana nezinto eziyinkimbinkimbi futhi angaphathwa njengenkosi. Ngaphezu kwakho konke, usebenza kahle, unesithakazelo, unomusa, unenhliziyo efudumele, ejabule futhi ikakhulukazi, ehlekisayo. Lokho kungamandla akhe.
U-Tolisso wayesefanelekile ukumela iTogo ngokusebenzisa uhlanga lwabazali bakhe. Ku-2016, izwe laseNtshonalanga Afrika laqala ukunyusa uTolisso ukuba amele isizwe esikhundleni seFrance. Naphezu kokuvuma ukuthi ubuhlobo bakhe baseTogo, uTolisso wadumala izwe ngemuva kokushintsha ukwethembeka kwakhe eFrance, ethi;
"Ngazalelwa lapha futhi ngakhulela lapha."
U-Tolisso unomdwebo wezingulube ezintathu ze-predator engxenyeni yakhe emele umndeni wakhe. Ezandleni zakhe, amagama;
"Ngiyazi ukuthi ngivelaphi"
kubhaliwe khona. I-tattoo yayiwuphawu lomlingiswa kaTolisso, imfundo nenkolo.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukungamangaleli u-Osmane Dembele
UTolisso akahluleli ukuziphatha komngani wakhe, Ousmane Dembele owaphikisana noDortmund ngokulahla ukudlala futhi efuna ukuba adluliselwe eBarcelona. Ngesinye isikhathi wathi uzobe enza okufanayo uma amaphupho akhe adlala eBayern Munich ebanjwe uLyon. Izizathu zithi iBayern yiyona nkampani yakhe yokuphupha ebuntwaneni futhi wayefuna izinkokhelo eziningi. I-Tolisso ngesikhathi se-2015-2016 noLyon bathola i- £ 20,192 ngonyaka. E-Bayern, wayene € 90,000.
I-Corentin Tolisso Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Idol yakhe
"Kunamagama amaningi engingayinika,"
kusho uTolisso. Lapho esemncane, umuntu oyedwa nomuntu uTolisso wayekuthanda UMichael Ballack ngenxa yobuntu bakhe eJalimane. Kamuva, uqinisekisile ukuthi uyisibonelo sakhe U-Franck Ribery.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeCorentin Tolisso Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Bayern Munich Football Diary
I-Lyon Football Diary
U-Abdoulaye Doucoure Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Karim Benzema Ingane Yenganekwane Plus Untold Biography Facts
I-Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Juni 16, 2020